पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ सालमा सुरु गरिएको बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । निर्माणाधीन सडक सम्पन्न नहुँदै भत्कन सुरु गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा उद्योग सञ्चालनका लागि धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । गत वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका २२ उद्योगमध्ये १७ उद्योगले निर्माण सुरु गरेका हुन् । पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरेका छन् ।
लुम्बिनी घुमफिर ३० मिनेट ! किन टिक्दैनन् पर्यटक ?
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रत्येक दिन बिहानदेखि साँझसम्म चहलपहल हुन्छ । दिनहुँ सयौं घुम्न आउँछन् । एकैछिन डुलेर फर्किन्छन् । मायादेवी मन्दिर दर्शन गरेर आसपासका केही बिहार छिरेपछि उनीहरूले बाटो तताउँछन् । यहाँ आउने पर्यटकको बसाइ अवधि निराशाजनक छ । आएकामध्ये ५ प्रतिशतले रात बिताउने गरेको पाइएको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार र ढुवानी व्यवसायमा संलग्न मजदुरलाई प्रशिक्षित तुल्याएर मात्र मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । इन्टरनेट पूर्वाधार तयार नगरी र मजदुरलाई प्रशिक्षणबिना सरकारले ढुवानी व्यवसायमा लागू गरेको ट्र्याकिङ सिस्टम अव्यावहारिक भएको उनीहरूले बताए ।
यहाँ निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना पूरा गर्ने गरी पछिल्लोपटक म्याद थप गरिएको हो ।
सुनौली–भैरहवा नाका हुँदै भारतबाट आयात गरिएको एक ट्रक आलुमा अत्यधिक विषादी भेटिएको छ । भारतबाट आयात गरिएका तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँच गरेर मात्रै भन्सार पास गर्न थालिएपछि यस नाकाबाट नेपाल भित्रिन लागेको तरकारीमध्ये अत्यधिक विषादी भेटिएको यो पहिलोपटक हो ।
विषादी जाँच गरेर मात्रै भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूल भन्सार जाँचपास गर्न थालिएको छ । भन्सार विन्दुहरूमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः परीक्षण थालिएको हो ।
ओभरलोडले सडक र पुल जोखिममा
ढुवानीका सवारी साधनले सडकको भार क्षमताभन्दा बढी (ओभरलोड) बोक्ने गर्दा यस क्षेत्रका सडक र पुल जोखिममा परेका छन् ।
बालिका अपहरणकारी पक्राउ
बालिका अपहरण गरी बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले बुटवलबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । २ दिनदेखि बन्धक बनाइएकी नाबालिकाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । बालिकालाई सुरक्षित गर्ने विभिन्न रणनीति अपनाएर अपहरणकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म हराइरहेकी सात वर्षीया बालिकालाई प्रहरीले बुधबार बिहान सकुशल उद्धार गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-१२ की ७ वर्षीया सावित्री थापा नामकी बालिकालाई प्रहरीले आज बिहान बुटवलको नेपालगञ्ज रोडस्थित होटेल दर्पणको कोठा नम्बर १०३ बाट उद्धार गरेको हो ।